Nagu saabsan - HEBEI YANJIN IMP EXP Co., Ltd.
—— Nagu saabsan ——
Hebei Yanjin Import and Export Co., Ltd. waa shirkad soo saarta, naqshadeysa oo iibisa farshaxan gacmeedka dhoobada dhoobada gacanta lagu farsameeyo. Waxay leedahay taariikh ka badan 19 sano. Alaabooyinka waxaa ku jira noocyo badan oo badeecooyin ah sida dusiyeyaasha dhismaha, farsamada gacanta iyo qurxinta. Alaabtayada waxaa loo iibgeeyaa Mareykanka, Yurub, Hindiya, Japan, Malaysia, Thailand iyo dalal kale oo badan oo adduunka ah, sidoo kale waxay leeyihiin faa'iidooyin suuqa qurxinta gudaha.
Waa maxay alwaaxda rinji gacmeed?
Foornooyinka gacmaha lagu rinjiyeeyo ayaa sidoo kale loo yaqaan 'alwaaxyada' tricolor ama dusiyeyaasha qurxinta. Magaca ayaa ka yimid farsamada Tri Color ee Boqortooyada Tang. Nidaamka wax soo saarku waa mid aad u adag. Xirfadda sawir qaadista, dejinta xariiqda iyo dhalaalka dhalaalaha dhammaantood waxaa lagu sameeyaa gacanta. Noocan dhoobada dhoobada ahi waa nooc farshaxan gacmeed dhoobada farshaxanka ah, isla mar ahaantaana, waa qurxin guryaha lagu yaqaan oo aad u caan ah. Noocyo badan oo habeysan oo loogu talagalay macaamiisha, ayaa loo isticmaali karaa hadiyado ganacsi, qurxinta guryaha, xusuusinta dalxiiska, iwm.
Foornooyinka noocan ah waxaa loo isticmaali karaa dabka, musqusha, jikada, qolka fadhiga iyo wixii la mid ah.
Nooca Ganacsiga Soo saare / Warshad, Shirkadda Ganacsiga
Nooca Milkiilaha Shirkad Xaddidan
Hawlaha sida Qurxinta Guriga ama Hadiyadda
(1) Qalabka dhismaha (marmarka gidaarka)
(2) Qurxinta miiska
(3) Gidaarka sudhan
(4) sheyga qaabaysan
(5) Soojiidashada qaboojiyaha
(6) Dabeecad & derin
Nooca Rinjiga Gacan ku rinji (Samee)
Cabirka la heli karo 6x6cm
Helitaanka OEM / ODM Haa
Waxaan diyaar u nahay inaan xiriir ganacsi la yeelano macaamiisha adduunka oo idil.
Haddii aad qabtid wax su'aal ah ama weydiin ah, fadlan si xor ah noogu soo dir e-mayl. Waan kuu soo jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Haddii wax uun aan kaa caawin karno, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.
—— Carwo ——